I-Spiro i-apricmo biochemical cdmo abavelisi
iimveliso > I-Spiro compounds
Ziziphi ii-Spiro Compounds?
I-spiro compound (ebizwa nangokuthi i-spirane) yindawo ephilayo, ikhemikhali eneesakhiwo esonteleyo sesondo elilodwa. Apha, amasongo adibaniswa kunye ne-athomu enye eqhelekileyo kubo bonke. Enyanisweni, igama elithi "spiro" lithathwe kwiLatini igama elithi spīra, elithetha i-coil okanye i-twist.
Uhlobo oluphambili lwe-spiro compounds luyi-bicyclic, olunezakhiwo ezimbini. (bi kuthetha ezimbini). Okanye, inokuthi ibe nengxenye yebhayisiki eya kuba yinxalenye encinci yenkqubo yokuncinci enkulu. Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi inxalenye, zonke iindandatho zixhunyiwe kwi-athomu enye echaziweyo.
I-Spirane ngamanye amaxesha ingaba i-carbocyclic ngokupheleleyo okanye i-heterocyclic. I-Carbocyclic ithetha ukuba i-compounds iyonke i-carbon, ngelixa i-heterocyclic ithetha ukuba i-compound ine-atom enye okanye ngaphezulu kwe-atom-carbon.
Izixhobo zomoya zineenkcukacha zezidakamizwa ezahlukahlukeneyo phantsi kwazo. Ezi zi yobisi zidweliswe ngezantsi -
Iintlobo ezahlukeneyo zoLwakhiwo lweSpiro
Njengokwakheka kwendandatho, i-spirane iyahlukana ngakumbi kwezinye iindidi.
Iimveliso zeSpiro zisetyenziswe kulo lonke ihlabathi. Ezinye zalezi zihlanganisi zisetyenziswe ngokupheleleyo njengezixhobo ezicwangcisiweyo ekufundeni kwintsimi ye-biomedical. Ezi zixhobo zisetyenziswa njengesikhokelo sokuncedisa unyango, ngokusebenza njenge-scaffolds.
IsiFundo esiPhambili seDrugs phantsi kweSpiro Components
Inombolo yokungeniswa kwesi sidakamizwa nguDB00490. I-Buspirone ikwaseklasini ye-azaspirodecanedione, i-serotonin receptor agonist kunye ne-agolist agent. Kwakhona, isilwanyana sinokusebenza okuthelekiswa nento ye diazepam.
Esi sidakamizwa sisetyenziselwa ukonyango lwexinzelelo kunye neengxaki zokuxhalabisa.
Inombolo yokungeniswa kwesi sidakamizwa nguDB04842. Uhlobo lwe-molecule encinci, eli liyeza li-agent e-antipsychotic ehlala ixesha elide kwaye ingafakwa. I-Fluspirilene isetyenziselwa unyango lwe-schizophrenia engapheliyo.
Inombolo yokungeniswa kwesi sidakamizwa nguDB00693. Ukongezelela kokusetyenziswa kweziyobisi kunye nezimonyo ngeenjongo zangaphandle, le nkunkuma isetyenziswe njengoncedo lwe-trauma kunye nokulimala ngenxa yeenjongo zokuthoba. Idayi yelinen eluhlaza okwesibhakabhaka e-yellow. Kodwa, iyakubonakala iluhlaza ngokukrakra kwi-alkaline-based mediums njenge-humorous humor.
• I-Phloxine B
Inombolo yokungenelela kwesi sigulo nguDB13911. I-Phloxine B okanye i-Phloxine ngumnxeba wombala. Isetyenziswe umbala ekudaleni iipilisi (amazinyo), kwaye njengesithako esiqhekezayo ukuncedisa umbala kwimveliso. Kwimeko yangaphambili, iipilisi zibanceda izigulane zicinga ngendawo apho kufuneke khona ukuxubusha / ukuxubha.
• I-Fluorescein lisicol
Inombolo yokungeniswa kwesi sidakamizwa nguDB12030. I-molecule encinane esetyenziswa ngokubanzi kwizilingo kwizifundo ezahlukeneyo zokufunda. Ukuxilongwa kwe-Hepatitis, Viral, Human, Nonalcoholic Steatohepatitis, i-Hepatic Cirrhosis, i-Pharmacokinetics kunye neNkunkuma engeyiyo yoTywala.
Ukubonisa konke 6 iziphumo